You are at:Home»NHAU DZEMITAMBO»Handivhunduke: Manyuchi
. . . ndakazviita kare, ndichazvidzokorora
SHASHA yetsiva yepasi rose – Charles Manyuchi – anoti hapana chichamutadzisa kuchengetedza bhande rake apo achasangana naQudratillo Abduqaxorov chizvarwa chekuUzbekistan kuSingapore svondo rinotevera.
Manyuchi, uyo ane bhande reWorld Boxing Council Silver welterweight – akasimuka svondo rino achibva nekuZambia kwaange achiita gadziriro dzake akananga kuSingapore uko acharwira kuchengetedza bhande rake. Mutambo wake naAbduqaxorov uriko nemusi wa25 Kurume.
Achitaura asati asimuka, Manyuchi anoti haasi kuvhunduka uye hapana chichamutadzisa kunohwina.
“Mutambo uyu ndange ndakaumirira zvikuru, yasvika nguva yekuti ndichirakidza pasi rose kuti ndiri shasha. Bhande iri nderangu uye ndicharamba ndinaro, ndichirirwira kuti ndirambe ndinaro ndigozounza mufaro kunyika yangu.
“Hapana chinonditadzisa kuzviita, ndakazviita kare saka ndiri kuzvidzokorora zvakare svondo rinotevera,” anodaro Manyuchi.
Muchinda uyu akakwanisa kuhwina mutambo uyu anenge ave nemukana wekuramba achisimukira zvekuti anogona kuzowaniswa mukana wekurwa nevatambi vane mukurumbira vakaita saAmir Khan naManny Pacquiao.
Parizvino Manyuchi akakwanisa kuchengetedza bhande rake achirwira kunyika dzekuEurope izvo zvakamuona achikunda Gianculla Frezza wekuItaly akazokunda zvakare Dmitry Mikhaylenko uyo waakatorera bhande reWBC Silver.